Ny X-49A, ny fiaramanidina haingana indrindra manerantany (Nave) | Vaovao momba ny dia
Marina izany, ity fiaramanidina ity tsy tripulated novolavolain'i NASA io no fiaramanidina haingana indrindra eran'izao tontolo izao. Ity fiaramanidina ity dia mihoatra ny hafainganam-pandehan'ny 8.000 Km / H (Mach 9.8) rehefa mahatratra ny haavon'ny 110.000 metatra.
Ny fiaramanidina fanandramana araka ny naseho ny X, dia tsy mitantana olona izay midika fa tsy ny olona ao anatiny no mitondra pilotra. Ho fanampin'izany rehetra izany dia ampiasaina ho solika halefa endrika mifangaro amin'ny rivotra sy hidrogen. Natomboka tamin'ny 28 martsa 2004 avy amin'ny fiaramanidina B-52B.
Ity fanandramana ity dia azo ampiasaina amin'ny ho avy amin'ny fiaramanidina ara-barotra ary avy eo mitambatra, ohatra, New York sy London afaka adiny 2 latsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Ny X-49A, ny fiaramanidina haingana indrindra eto an-tany (Sambo)
Ity fiaramanidina ity kosa dia balafomanga, satria tsy afaka miainga irery, fa na izany na tsy izany dia io no fiaramanidina haingana indrindra, antsoina hoe inona.